Muxuu yahay gawaarida cusub GvSIG 2.0 macnaha - Geofumadas
Waa maxay gvSIG version 2.0 cusub
Abriil, 2013 GvSIG, tabo cusub
Waxaan rajeyneynaa inaanu ku dhawaaqno waxa ururka GvSIG u soo gudbiyey: GvSIG 2.0; mashruuc oo ka shaqeynayay waxoogaa barbar socda horumarinta 1x iyo in ilaa hadda ay naga tagtay si aad ah ugu qanacsan tahay 1.12.
Waxaa ka mid ah qaababka cusub, version this ayaa naqshadda dhismaha ah oo horumarka cusub, kaas oo dib uqaabaynta jidka gvSIG qabtaa ilaha xogta si loo hagaajiyo isku halaynta iyo modularity labadaba, sidaas oo ay ka faa'iideysanayaan dadka isticmaala iyo horumarinta labadaba . Intaa waxaa dheer in loo oggol yahay fududeynta dayactirka iyo horumarinta tiknoolajiyada. Waxa ay ahayd, sidaas darteed, maalgashi mustaqbalka iyada oo ujeedadu ma yareysey isbedel tiknoolaji iyo aasaaska u ah horumar degdeg ah jiifay.
Qaabkan cusub ee gvSIG Desktop ayaa sidoo kale soo bandhigaya taxane cusub oo cusub:
- Qalab cusub oo taageera rakibidda caadiga ah iyo caadooyinka; sidaas darteed waa suurtogal in la xakameeyo waxa aan rajeyneyno in aan ku xirno oo aan is hortaagno; aasaas u ah habka loogu talagalay dadka isticmaala horumarsan.
- Maamulaha kormeeraha kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku rakibto ballaarin cusub oo aad u qaabeyso gvSIG-gaaga codsigiisa laftiisa.
- Isbeddelada qaar ka mid ah isugeynta hababka maamulka xogta sida:
· Soo dejinta / dhoofinta faylasha.
· Hawlaha miisaska.
· Lakabka cusub
- Hagaajinta waxqabadka dusha sare.
- Taageerada WMTS (Adeeg Khidmadda Shabakada Goobta).
- Xaanshida xogta Raster.
- Isku-xir dhexdhexaad ah oo juqraafi ah.
- Soo dejiyaha calaamadaha, fududeynta jiilka maktabadaha.
- Soo dhoofiyaha calaamadaha, taas oo u sahlaysa wadaagista buugaagta calaamadaha dhammaystiran ee la isticmaala kuwa kale.
Waa in aan maskaxda ku heynaa in tani aysan ahayn gvSIG 1.12 wanaajiyay; Sida aan hore u soo sheegnay, waa mashruuc dhexdhexaad ah oo soo saara version ah oo aan ognahay inuu bedeli doono asalka 1x. Inkastoo inkasta oo uu ahaa gvSIG ugu dambeeyey, dhab ahaantii waxaan leenahay gvSIG cusub, sidaa daraadeed waxaan ogaanay inaysan haysan wax ka mid ah qaababka gvSIG 1.12. Farsamooyinkaasi waxaa lagu dhex darayaa wakhti isdaba joog ah oo joogto ah marka ay u guuraan dhismaha cusub. Hawlaha ugu muhiimsan ee aan la heli karin waa:
- Dabeecadaha calaamadaha saamigaliga ah, qalanjabiyey, cufnaanta dhibcaha, tirada maaddooyinka iyo sheekooyinka
- Fidiyo: Falanqaynta Shabakada iyo 3D.
Sidoo kale waxaa jira mashaariic dhowr ah oo ku salaysan dhismahan cusub kaas oo u oggolaan doona shaqooyinka cusub iyo hagaajinta si toos ah uga muuqata gvSIG 2.0 bilaha soo socda.
Waa inaan sidoo kale xusuusneynaa in heerka xasilloonida ee versionkan cusub uusan ahayn mid aad u sarreeya sida mid ka mid ah lahaa lahaa lahaa -waqtigan-, iyada oo tixgelineysa kama dambeys si ay bulshadu u bilaabato inay u adeegsato si rasmi ah iyo, inta badan, si wax looga qabto horumarka cusub ee ku saabsan.
Taas oo dhan waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad tijaabisid oo aad u sheegto khaladaadka aad ku aragto si aan ugu saxno wixii ku cusub updates. Cilladaha la og yahay ee noocan ah waxaa lagala tashan karaa xiriirrada kor ku xusan.
Qaybtan, muraayado dhowr ah ayaa sidoo kale loo suurageliyey in ay soo dejiyaan wax-qabadyada gvSIG. Muraayadaha ayaa la heli doonaa dhawr maalmood.
Dadka ka danbeeya mashruucan ayaa inoo rajeynaya in aan jeclaano qaababka cusub ee version cusub iyo si loo hagaajiyo.
Dhinaceena, waxaan u hambalyeynaynaa dadaalka mashruucan; in ka dib markii uu soo jiidanayo qaab cusub oo liddi ku ah qaabka dhaqameed, ka gudubka farsamoyaqaanku wuxuu ilaaliyaa edbin xiiso leh oo ku saabsan maamulka bulshada oo dhan kaas oo ah kan si joogta ah u siiyay fikradda bilawga ah. Waxaan ognahay adag oo ka mid ah model Open Source, laakiin aniga kiiskeyga, ku faraxsanahay in ay gaaraan degmada ee dalalka Americas a duwo in dunidu iska dhega, iyo ka dib maamuuska salaan diiran helay madaxa dalkaas isku day inaad sheegto:
Halkan waxaan isticmaalnaa gvSIG. Anigaa anigaa sameeyay.
Post Previous«Previous Sida loo xariiro internetka meelo fog
Post Next Ka mid noqoshada dhinaca bulshada, hababka tababarka farsamadaNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Muxuu GvSIG 2.0 cusub u rogaa"
Waad ku mahadsantahay inaad ka fekereyso wararka ku saabsan bloggaaga iyo cutubka ugu dambeeya ee tusaya mid ka mid ah sababaha aan ugu riyaaqeyno mashruucaan.